नयाँ चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनेको सङ्ख्या पाँच लाख नाघ्यो — Raranews.com
काठमाडाैं। नयाँ चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनेको सङ्ख्या पाँच लाख नाघेको छ। देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत परीक्षामा सहभागी हुनका लागि सेवाग्राहीले फाराम भरिरहेका छन्।
गत वर्ष चैतदेखि कोभिड-१९ का कारण सरकारले नयाँ चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन लिने काम स्थगित गरेको थियो। झण्डै १० महिनासम्म अनुमतिपत्र बन्द भएर अहिले खुलेकाले चाप बढी भएको विभागका सूचना अधिकारी डा. लोकनाथ भुषालले बताए।
उनका अनुसार सेवाग्राहीले २४ घण्टा नै र सातामा सात दिन नै अनलाइन फाराम भर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। उनले भने, “सेवाग्राहीले अनुकूल समयमा फाराम भर्न सक्नुहुन्छ।”
गत पुसमा अनलाइन फाराम लिन थाल्दा विभागले निश्‍चित समयभित्र मात्रै भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। निश्‍चित समय मात्रै हुँदै धेरै सेवाग्राहीले एकै पटक भीड भएकाले सेवाग्राहीले फाराम भर्न सकेका थिएनन्। अहिले फाराम भर्न नसकिने समस्या हटेर गएको प्रवक्ता डा. भुषालले जानकारी दिए। “अहिले पनि बिहान र साँझभन्दा दिउँसोको समयमा फाराम भर्ने सेवाग्राही धेरै छन्,” उनले भने, “फाराम नै भर्न सकिएन भन्‍ने गुनासो विस्तारै कम भएको छ।”
विश्वव्यापी माहामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को सङ्‍क्रमण नेपालमा पनि देखिन थालेको थियो। नेपालमा दोस्रो सङ्‍क्रमित भेटिएसँगै सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीका कारण देशभरका सबै सरकारी कार्यालयसँगै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु पनि बन्द भएका थिए। कोभिड-१९ बाट सुरक्षित हुँदै असारदेखि कार्यालय खुले पनि नयाँ चालक अनुमतिपत्र सेवा अवरुद्ध थियो।
कार्यालयले चालक अनुमतिपत्र वितरण र नवीकरण जारी राखेपनि कार्यालयमा भीड हुने भन्दै नयाँ अनुमतिपत्र सेवा अवरुद्ध गरेको थियो। प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका कार्यालय र सङ्‍घीय सरकारअन्तर्गतको विभागबीचको समन्वयमा नै गत पुसदेखि नयाँ अनुमतिपत्र खुलाइएको थियो।
संविधानअनुसार यातायातसम्बन्धी जिम्मेवारी सङ्‍घ र प्रदेशमा बाँडिएपछि कार्यालयहरु नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। अहिले विभागले चालक अनुमतिपत्रको सर्भरको काम र छपाइको काम गरिरहेको छ। कार्यालयहरुले अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्‍चालन, वितरण र नवीकरण गर्दै आएका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा बागमती प्रदेश सरकारले एकान्तकुनासँगै चावहिल, सानो भर्‍याङ र जगातीमा रहेका कार्यालय रहेका छन्। रासस
आजदेखि कोरोनाविरूद्धको खोप पत्रकार र कुटनीतिज्ञले लगाइँदै